30 mars 2018 admin Aucun commentaire
Na dia teo aza ireo fanaratsiana sy fanaovana tsinontsinona ny pasteur Mailhol sy ity fiangonana tarihiny ity dia tsy nahasakana ireo 345 mianadahy niroso izany satria raha ny nambaran’izy ireo dia: “tsy olona no arahinay ao amin’ny fiangonana fa ny fahamarinana, io no fototra iorenanan’ny finoanay.” Hany ka na dia maro aza ireo eson-teny sy latsa ataon’ny manodidina dia niroso hatrany izy 345 mianadahy ireto.
“…Sarotra sy mafy ny lalàna kanefa ny fanahy tsy azo amidy….” hoy ny renim-pianakaviana iray raha nanontaniana ny antony nirosoany
“….na dia eo aza ny hatanorana dia mila tsinjovina ny ho avy, dia ny fiainana mandrakizay fa tsy ho variana amin’ny rendrarendran’izao tontolo izao….” hoy ny tanora izay nanontaniana ny heviny.
← Kandidà ho filoham-pirenena ny pasteur Mailhol ny taona 2018